Miara-miaina amin’ny corona sy ny covid-19 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Amin’ny toerana maro eto amin’ny firenena dia hita fa efa miverina amin’ny fiainana andavanandro ny olona. Mianatra ny mpianatra, ny fanadinana nandeha ara-dalàna, efa eo am-piandrasana ny taom-pianarana vaovao ny sekoly samihafa ; misokatra ny fiangonana ; ny tsena moa dia efa mifanjevo, tsy fantatra intsony izay fanajana ny elanelana sy ny fisorohana ny fifindran’ny aretina. Ny arovava aza efa midina ambany saoka ; ny fiara fitaterana efa feno hipoka.
Misy fepetra apetraky ny fanjakana anefa mbola tsy miova, toy ny hamehana ara-pahasalamana, ny famerana ny olona afaka mivory sy mivavaka. Toa nanjary nifanalavitra ilay fisorohana ny aretina sy ny fepetra sisa mipetraka. Ireo toerana nitantanana ny valanaretina toy ny eny Ivato, na ny tao Alarobia sy Mahamasina efa nakatona. Mandray ny tena andraikitra ara-pahasalamana amin’izay izany ny mpitsabo sy ny minisiterany. Teo manko dia ny miaramila no nahetsika toy ireny miatrana am-bava basy ireny, fa ady moa no resaka : ny lalana sy ny fifandraisana no tapaka voalohany ka nanjary ady anaty akata ny fiainan-dRamalagasy.
Raha tsy fandriam-pahalemana no voafehin’ireny fepetra ireny dia ho nahomby ny paikady ; saingy manerana ny Nosy dia mitombo ny tsy filaminana sy fandrobana. Ary dia very an-javony ny fiarovana ny olona sy ny fananany. Misy olona izany tsy voasakan’ny hamehana sy ny fitandroana ny filaminana. Raha eran-tany indray dia mbola voasakana tsy hiditra ao Frantsa ny Air-Madagascar na dia matanjaka aza ny fiodinana faharoa ao amin-dry zareo, dia isika no ahiahiany. Dia mbola mahita faisana ny fandraharahana momba ny fizahantany. Inoana kosa fa nanatsara ny tontolo fandraisany vahiny ny mpandraharaha, fa tsy hiandry fotsiny ny fanjakana.
Na izany na tsy izany miandry ihany ny rehetra izay entin’ny filan-kevitry ny ministra sy ny filan-kevitry ny governemanta momba ny fanarenam-pirenena aorian’ny COVID, saingy toa mihanona amin’ny fepetra isaky ny 15 andro ihany ny resaka. Asa moa izay ho entin’ny fanatanterahana ny teti-bola nasiam-panitsiana. Lafin-javatra roa lehibe no azo aroso : voalohany, ny momba ny fampandrosoana mirindra isam-paritra. Ary faharoa, ny fanarenana ny toe-karena amin’ny lafiny famokarana sy fivezivezen’ny vokatra, tarafina amin’ny fitsinjarana sy fampiasana ny vola isaky ny andrim-panjakana.
Anisan’ny manahirana ny any amin’ny faritra ny tsy fisian’ny vola nivezivezy. Mety misy manana sakafo, fa maro ireo sahirana amin’ny fivarotana ny vokatra. Na dia ny kisoa sy akoho amam-borona aza tsy ahitana mpividy. Mila fanentanana manokana indray izany ny fampiroboroboana ny fanjifana eto an-toerana. Fa mampanontany tena ihany koa ny politika ara-bolan’ny fanjakana. Raha tsy miditra ny vola vahiny, raha tsy nandeha ny fanondranana entana, hiandry fanampiana hatrany ve ny fanjakana ? Ny hetra sy ny vola tokony hiditra, mazava loatra fa ho latsaka ambany dia ambany.
Iza àry no hameno ny lavaka amin’ny volam-panjakana ? Manao ahoana ny fifandanjan’ny fandaniana isaky ny minisitera sy ny rafitra samihafa, araka ny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsina ? Ohatra, raha tsy hijery afa-tsy ny anteminieran-doholona, 16 milliards, lany amin’ny fampandehanan-draharaha sy ny karama. Tsy misy fampiasam-bola hafa voafaritra ; ny an’ny Présidence 210 milliards, ny 60 milliards lany hampandehan-draharaha sy karama. Ny fanampiana avy any ivelany antenaina, efa mahatratra 800%. Ny zana-bolan’ny trosa anefa tsy maintsy aloa.
Santionany amin’ny fiainam-pirenena ilàna fandalinana ireny, hahitana ny hoe, ahoana marina no handinihantsika ny fahasalaman’ny fitantanana ny firenena sy ny hanarenana azy amin’ny ankapobeny. Mila fikaonan-doha isam-paritra izany mba hihainoana ny hetaheta any ifotony sy hanairana ny fiaraha-mientan’ny firenena.